Vaovao - teboka maromaro no tokony hojerena rehefa mampiasa ny fampisehoana fiara
Teboka maromaro no tokony hojerena rehefa mampiasa ny fampisehoana fiara
1, ny ampahany amin'ny lamba dia ny vokatra fitaratra, ny sisin'ny fitaratra ary ny zorony dia maranitra, ny fametahana dia mila mandray fonon-tànana / fonon-tànana.
2. Ny ampahany amin'ny efijery fifandraisana dia vera marefo. Aza mampisy fiantraikany mahery eo amin'ny efijery fifandraisana rehefa mametraka.
3, ny tontolon'ny sarimihetsika fifandraisana dia ny sehatry ny fifandraisana, izany hoe eo aloha; Ny faritra fitaratra dia ny faritra tsy mifandray, izany hoe ny ao ambadiky ny vokatra
4. Sakano ny fitarihana mivantana handray ny efijery fifandraisan'ny olona, ​​ary hisorohana ny fisarihana hetsika amin'ny ampahany mitarika.
5. Ny ampahany amin'ny takelaka fanamafisana tariby tsy azo aolika.
6, ny ampahany amin'ny tariby firaka dia tsy avela hanana ny antsasaky ny fisehoan-javatra. Rehefa apetraka ny tariby firaka, dia tsy maintsy hotevezina mitsivalana izy fa tsy amin'ny antsasaky ny faka amin'ny lovia manamafy.
7, raiso ary apetraho ny vokatra dia mila fandidiana tokana, tantano am-pitandremana, mba hisorohana ny fifandonan'ny vokatra mifanohitra amin'izy ireo ary hikororosy ny bikan'ny vokatra.
8. Rehefa manadio ny fisehoan'ny vokatra dia esory amin'ny lamba malemilemy (diera) atsoboka anaty ether solika.
9. Aza apetaho ny efijery fifandraisana.
10, tandremo ny: aza mampiasa solvent organika manimba hamafana ny ambonin'ilay sarimihetsika efijery fifandraisana.
Fiara - nitaingina lalana roa maty - fisehoana farany
Angle an-tsaha Angle, fantatra ihany koa amin'ny hoe faritra an-tsaha an-tsaha, dia eo amin'ny fahitana maro, noho ny tanjon'ny sakana ary tsy mahita ilay toerana. Tokony harahina manokana ireto toe-javatra manaraka ireto:
1. Ireo fiara mijanona eo amoron-dalana dia hamorona teboka jamba ho an'ireo mpamily fiarakodia eo akaiky eo sy ireo mpandeha an-tongotra mamaky ny arabe.
2. Ny havoana, tranobe na ala mikitroka amin'ny lafiny roa amin'ny fihaonan-dalana sy eo afovoan'ny fihodinana maranitra dia mamorona teboka jamba ihany koa ho an'ireo mpitondra môtô sy mpandeha an-tongotra.
3. Ireo mpandeha midina amin'ny ilany ankavanan'ny aotobisy dia tsy mahita ny lalana intsony amin'ny làlana roa amin'ny varavarana.
4. Ho an'ny fiara mandalo, fiara miadana eo alohany dia mamorona toerana jamban'ny mpamily mandalo.
5. Ny familiana amin'ny alina, ny lafiny iray hafa dia tsy manana andry avo, raha misy jiro manazava, dia hiteraka faritra jamba lehibe.